Voka-pifidianana vonjimaika: mitarika amin’ny salanisa ambony ho an’ny faritra 15 Rajoelina | NewsMada
Voka-pifidianana vonjimaika: mitarika amin’ny salanisa ambony ho an’ny faritra 15 Rajoelina
Tombanana fa mety tsy hisy fiovana firy ny voka-pifidianana ofisialy havoakan’ny HCC, afaka herinandro mahery eo. Tsy azo ihodivirana ny hirosoana amin’ny fihodinana faharoa. Manatombo amin’ny fahazoana vato amin’ireo faritra 22 anefa ny kandidà Rajoelina raha mitaha amin-dRavalomanana, raha miainga amin’io voka-pifidianana io.
Mitarika amin’ny faritra 15 ny mpanorina ny IEM. Anisan’ny nahazoany vato mihoatra ny 63% ny any amin’ny faritra Melaky, Diana, Atsinanana ary Atsimo Andrefana. Nahazo tombony any amin’ny faritra fito hafa kosa anefa ny mpanorina ny Tim ka anisan’ny mbola eo am-pelan-tanany ny faritanin’Antananarivo teo aloha. Anisan’izany faritra Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinankaratra. Manampy ireo ny any Amoron’i Mania sy hatrany Boeny. Mifampitana kosa Rajaonarimampianina sy Rajoelina ho an’ny any amin’ny faritra Sava. Voalohany nahazo ny 37% izy tany an-toerana. Tsy nifanalavitra ny kosa izy ireo tany amin’ny faritra Anosy.
Tsy miverina ny volan’ny kandidà Rajaonarimampianina…
Ankoatra izany, miverina ny anto-bola, 50 tapitrisa Ar an’ny kandidà roa hiatrika ny fihodinana faharoa, nahazo ny mihoatra ny 10% izy ireo : Ravalomanana sy Rajoelina. Ny laharana fahatelo, ny kandidà Rajaonarimampianina nahazo 8%. Izany hoe latsaky ny 10% ka tsy miverina ny volany sy ireo kandidà sisa rehetra raha miainga amin’ny voka-pifidianana vonjimaika navoakan’ny Ceni.
Nihena ny vaton’ireo kandidà efa nirotsaka tamin’ny 2013
Ankoatra izany, enina ireo kandidà efa nilatsaka hofidina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena mbola niverina nirotsaka tamin’ity indray mandeha ity. Nihena sy latsaka ambany avokoa anefa ny vato azon’izy ireo. Anisan’izany Rajaonarimampianina Hery, voafidy filoham-pirenena ny taona 2013. Ny kandidà isany, Randriamampionona Joseph Martin na i Dadafara, Rabeharisoa Saraha, Radavidson Andriamparany, Ratsiraka Iarovana Roland ary i Tabera Randriamanantsoa.
Ny depiote Tim, Razafimanantsoa Hanitra : “Manaiky ny voka-pifidianana vonjimaika izahay. Na izany aza, tokony hahay haka lesona amin’ny fifidianana manaraka ny Ceni na niseho aza ny tsikera sy ny fanakianana. Tsy maintsy hatsaraina izany. Samy mandray ny andraikiny ny tsirairay. Efa nanao fampitahana ny voka-pifidianana izahay araka ny tratra. Ny tsy vita, iarahana amin’ireo mpahay lalàna ao amin’ny KMMR ary halefa any amin’ny HCC. Mampieritreritra koa anefa ny vato maty sy ny fotsy tamin’ity fifidianana ity fa nahazo ny laharana fahefatra… Arahabaina ny kandidà roa tafakatra amin’ny dingana manaraka”.
Ny kandidà natolotry ny PDS, Bezaza Eliana : “Tena ametrahana ahiahy ny momba ny vato efa voamarika. Mamoafady izany nefa tsy misy miezaka mitady ny marina. Hampikorontana antsika izany. Anisan’ny olana koa ny vola ho an’ny takelaka hazo natao hametahana ny afisin’ny kandidà. Tsy nahita azy ireny izahay tany amin’ny faritra maro. Tsy tokony ho vitavita ho azy na ho afa-bela ireo tompon’andraikitra nanao antsirambina ny fikarakarana ny fifidianana. Tena mamarina an-kady ny firenena ary ho ratsy ny tantara raha mitohy ny tahaka ireny”